WARARKII UGU DANBEEYAY QARAXII GALKACYO-SAWIRO IYO VIDEO 17-MAY-2020 | RunsheegNews
WARARKII UGU DANBEEYAY QARAXII GALKACYO-SAWIRO IYO VIDEO 17-MAY-2020
AHMED MUSE NUR-(AU)GUDOOYIHII GOBOLKA MUDUG OO GEERIYOODAY QARAXII MAANTA GALKACYO
Gudoomiyihii Gobolka Mudug iyo saddex illaaladiisa ah ayaa ku geeriyooday qarax gaari oo lagu dhuftay gaari uu saarnaa marxuum (AU) Ahmed Muse Nur, sida uu u sheegay Reuters kabtan boolis ah oo lagu magacaabo "Mohamed Osman".
Waxaa sheegtay ururka Argagixisada ah ee Al-Shabaab oo uu u hadlay ninka u qaabilsan weeraradda Abdiasis Abu Musab.
Waa markii labaad mudo kooban oo kooxda Al-Shabab ay ku dilaan gudaha puntland madax sar-sare,waxay dhawaan qarax isna ku dileen Allaha u Naxariistee Marxuum Gudoomiyihii Gobolka Nugaal Abdisalan Hassan Hersi.
Madax-weynaha puntland Mudane said Abdullahi Deni ayaa tacsi tiraanyo leh u diray dhamaan dadkii ku geeriyooday qaraxaaas.
QARAXII MAANTA GALKACYO 17-MAY-2020
Madaxweynuhu waxa uu tiiraanyada Geeridaasi la qaybsanayaa shacabka Puntland, gaar ahaan eheladii, qaraabadii uu ka baxay Guddoomiye Axmed Muuse Nuur, waxaana uu Alle uga baryayaa inuu dembigiisa dhaafo samir iyo iimaanna kasiiyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Puntland.
— Jama Deperani (@jama_deperani) May 17, 2020
Galmudug State House on Twitter
Madaxweynaha Galmudug Ahmed Abdi kaarie(Qoorqoor) ayaa tacsi udiray Shacabka iyo madaxda Putland gaar ahaanna eheladii & asxaabtii uu ka geeriyooday gudoomiyihii Gobolka Mudug ee Puntland Axmed Muse Nuur oo kooxaha nabad-diidka ah ee kula beegsadeen qarax ismiidaamin ah Gaalkacyo pic.twitter.com/OBCuPA8mYR
— The Sudani Design (@SudaniDesign) May 17, 2020